I-Casa Arazari - I-Airbnb
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguValeria
Le yenye yeendawo ezimbalwa kule ngingqi ezinale nto inokusetyenziswa.
Indlu entsha, enefenitshala epheleleyo neyibona kakuhle iNtaba-mlilo neValley! Ikwindawo ethe cwaka ekufutshane neAtenas phakathi edolophini (4.5Km). Igumbi elikhulu w/ Ibhedi enkulu kunye negumbi londwendwe elinye. Amagumbi okuhlambela amabini apheleleyo. Uyilo lwale
mihla kunye nokuhonjiswa. Ikhitshi elikhulu, elidityanisiweyo elinemiphezulu yeetafile zelitye kunye nazo zonke izixhobo zombane. Indawo enkulu kakhulu yokuhlala eneefestile ezinkulu nezikrini zeengcongconi. Ithala elikhulu elineveranda kunye ne-jacuzzi eyakhiwe ngaphakathi. Umbono omhle kuyo yonke indawo.
Iinkonzo ziquka umgcini wegadi kunye nentombazana (kanye ngeveki).
Le ndlu isebenzisa eli thuba njengoko indlu iyinxalenye yendawo enesityalo sekofu. Zombini zikufutshane neAtenas edolophini (4.5Km) kwaye ziyimfihlo ngokwaneleyo ukuba zidibane kufutshane nendalo yaseCosta Rica.
Ibhedi enkulu eyi-1, 1 ibhedi elala abantu ababini, ibhedi elala umntu omnye eyi-1
4.94 out of 5 stars from 188 reviews
4.94 · Izimvo eziyi-188
Le ndawo ilungele abantu abathathe umhlala-phantsi. Abanye abamelwane bethu bathathe umhlala-phantsi
Umbuki zindwendwe ngu- Valeria
Sinokunceda iindwendwe ngemibuzo kwaye sicebise abantu abakhenkethisayo/ iiarhente.